Sida Horay La isaga diiwaangeliyo Boston Public Schools | Boston School Finder
Sida layskaga qoro durbadiiba Boston Public Schools
Boston Public Schools waxay bixisaa diiwan hordhac ah inta lagu gudo jiro Diseembar kahor inta aysan bilaaban diiwaanka mudnaanta ee Janaayo. Nidaamka diiwaangelinta hordhaca ah waxa uu kuu ogolaanayaa inaad dhameystirtid inta badan warqada oonleenka diiwaankaaga ee BPS, sida buuxinta warbixinta canugaaga iyo darajeynta dugsiyadaada.
Fadlan ogoow: sababo la xariira aafada cudurka socda, dhammaan Xarumaha Soo dhawayn ee BPS in si ku meel gaar ah looga xiray dadwaynaha.
Goorma ayaan canugeyga (carruurteyda) ka diiwaangelin karaa diiwaanka hordhaca ah ee BPS?
Diiwaangelinta dhordhaca ah ee BPS waxay oonleenka ka furmeysaa laga bilaabo Isniinta, Diseembar. 21, 2020.
Sidee ayaan u sameyn karaa diiwaangelinta hordhac ah ee onleenka?
1. Aruurso dukumiintiyadaada daganaanshaha ee lagaa doonaayo.
Dhammaan Xarumaha soo dhawaynta ee BPS ayaa si ku meel gaar ah ugu xiran dadwaynaha sabab la xariirta aafada cudurka. Hase yeeshee, waxaad awoodi doontaa inaad soo geliso dukumiintiga lagaa rabo ee caddaynta meesha aad dagan tahay oonleen ahaan adoo adeegsanaaya hanaankaan diiwaan gelinta hore.
Soo geli barta DHAMMAAN, dukumiintigaan:
Shahaadada rasmiga ah ee cunuga, foomka I-94, ama baasaboor; iyo
Diiwaanka tallaalka taariikhda oo illaa iyo hadda ah; iyo
Sawirka aqoonsiga Waalidka/Masuulka.
Soo geli barta LABO kamid ah dukumiintiyadaan. Ogoow: dukumiintiyadu ma noqon karaan kuwo quseeya hal qodob oo ku jira liiska hoose:
Biilka qarashaadka (ma ahan biyo ama mobeelka) oo taariikhdiisu tahay 60 maalmood ee la soo dhaafay
Heshiiska guriga hadeer, qeybta 8 heshiiska, ama is afgaradka dagayaasha BPS
Lacag bixinta hantida ama deynta guriga oo taariikhdeedu tahay 60 maalmood ee la soo dhaafay, ama biilka canshuuraha dhismaha oo lagu taariikheeyay gudaha sannadka la soo dhaafay
Bayaanka kaarka bangiga ama kaarka deynta oo taariikhdiisu tahay 60 maalin ee la soo dhaafay
Foomka W2 oo taariikhdiisu tahay sannadka, ama rasiidka joornaatiga oo lagu taariiqeeyay gudaha 60 maalin
Warqad ka timid hay'ada dowlada la ansixiyay oo taariikhdiisu tahay 60 maalmood gudahood
2. Ka booqo oonleenka DiscoverBPS.
Hoos u wareeji websaydka oo riix ciwaanka dhahayo "Diiwaanka-hordhaca ah." Waxaa lagu geynayaa Bogga Oonleenka ee Nidaamka Warbixinta Ardayga BPS.
3. Sameyso akoonkaaga oonleenka.
Bogga xiggo, raac ciwaanka dhahayo: "Ma u baahantahay diiwaanka hordhaca ah ee BPS? Riix halkaan oo dooro iqtiyaarka 1aad." Raac tilmaamaha lagu sameysanaayo akoonka oonleenka.
4. Gal Barta Nidaamka Xogta Ardayga ee BPS, oo sidoo kale loo yaqaano "SIS" ama "Aspen."
Markii aad gashid, dhameystir foomkaaga diiwaangelinta hore ee oonleenka. Geli warbixintaada sida waalidka/daryeelaha sidoo kale sida warbixinta canugaaga (carruurtaada). Waxaan liis kala sarayn u samayn doonaa dugsiyadaada waxaadna sidoo kale awood u lahaan doontaa inaad soo geliso dukumiintiga caddaynta meesha aad dagan tahay xiligaan.
Tilmaamaha faahfaahsan ee sida oonleen ahaan xili hore la isku sii diiwaan geliyo ayaa laga heli karaa halkaan ayadoo Ingiriis ah.
4. Qabso balan si aad khadka taleefanka ugula hadasho taqasusle dhanka diiwaan gelinta oo ka socda Xarunta soo dhawaynta.
Inkastoo aad xili hore isqortay, wali waa inaad la hadashaa taqasusle dhanka diiwaan gelinta oo ka socda Xarunta soo dhawaynta si aad u dhamayso diiwaan gelintaada dugsiga. Ka qabso balantaada taleefanka halka oonleen ah. Markaad wicitaankaaga ku balansato oonleenka, waxaad awood u leedahay inaad balan ku codsato luuqadaada hooyo haddaad u baahan tahay.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan la xariir Adeegyada Soo dhawaynta ee BPS ood ka wacayso 617-635-9010.